Ukurhweba ngeMargin ukuze ufumane inzuzo enkulu! 🥇 Fumana uMthengisi oBalaseleyo! NgoJanuwari 2022
Funda ngesiKhokelo sesi-2 soRhwebo ngo-2021 kuRhwebo lweMargin!
Ukuhlaziywa: 17 Novemba 2021
Ukurhweba ngomda yinkqubo yokusebenzisa ubungakanani kutyalo-mali lwakho. Ngokwenza njalo, uya kuba nakho ukurhweba ngemali eninzi kunokuba unayo kwiakhawunti yakho.
Ngelixa urhwebo lomda lunokunyusa inzuzo yakho, lunokunyusa nelahleko yakho. Ngale nto engqondweni, kufuneka ube nokuqonda okuqinisekileyo malunga nendlela yokurhweba kwimida ngaphambi kokuthatha.
Kwisikhokelo sethu sokuFunda soRhwebo esi-2 soRhwebo ngo-Margin, sichaza yonke into ekufuneka uyazi. Asipheleli nje ekugubungeleni i-ins kunye nokuphuma kwendlela yokurhweba kwimida, kodwa sixoxa nabathengisi abaphambili bokuqalisa namhlanje.
Qaphela: Ukuba urhwebo lwakho olurhuqwayo luchasene nawe ngaphezulu kunokuba unayo kwiakhawunti yakho yomda, urhwebo luya kupheliswa ngumthengisi. Oku kuthetha ukuba uya kuphulukana nomgama wakho.
Yintoni iMargin Trading?
Kwindlela yayo esisiseko, urhwebo lomda lubhekisa kwinkqubo yokusebenzisa ubungakanani kumashishini akho. Nokuba yi-forex, isitokhwe, ii-indices, ii-cryptocurrensets, okanye izinto zorhwebo- unokufaka amandla okunyusa nakweyiphi na iklasi yeasethi oyikhethayo. Ngokwenza njalo, uthengisa ngokufanelekileyo ngemali eninzi kunokuba unayo kwiakhawunti yakho. Kungenxa yokuba uboleka imali kwi-broker oyikhethileyo, eya kuthi ke itsala umrhumo wezemali.
Ngokwendlela esebenza ngayo, kuya kufuneka ukhethe inani lexabiso onqwenela ukulifaka kurhwebo lwakho. Umzekelo, masithi une-akhawunti eseleyo ye- $ 500, kwaye usebenzisa amandla we-10x. Kwithiyori, oku kuthetha ukuba eneneni uthengisa ngesibonda se- $ 5,000. Ke, ukuba wenza i-5% kurhwebo, inzuzo yakho iya kwandiswa ukusuka kwi-25 ukuya kwi-250 yeedola.
Kwelinye icala isiphelo, iilahleko zakho ziya kwandiswa. Umzekelo, ukuba urhwebo olungentla luye lwehla nge-2%, ilahleko zakho ziya kwandiswa ukusuka kwi-10 ukuya kwi-100 yeedola. Nokuba uthatha isigqibo sokufaka isicelo kangakanani, kuya kufuneka ubeke 'umda'. Oku kufana nediphozithi yokhuseleko ebanjwe ngumthengisi de kube urhwebo luvaliwe.
Ukuba isiphumo, ukuba urhwebo luhamba ngokuchasene nawe ngaphezulu kokulingene kumda, umthengisi uya kuvala ngokuzenzekelayo urhwebo lwakho. Oku kwaziwa njenge 'kucinyiwe', kwaye kuthetha ukuba uya kulahla umda xa uwonke. Kungenxa yoko le nto kufuneka ube nokuqonda okuqinisekileyo malunga nendlela yokurhweba ngomda kunye nokusebenza, njengoko ungaphulukana nemali eninzi ukuba awunazo iindlela zokukhusela ilahleko.
Ziziphi iinzuzo kunye neengozi zokurhweba kweMargin?
Urhwebo ngaphezu kokuba unayo kwiakhawunti yakho yomrhwebi
Yandisa inzuzo yakho ngaphandle kokufuna ukufaka imali engaphezulu
Ifumaneka phantse kuyo yonke iklasi yeeasethi onokuyicinga
Ukurhweba ngomda kungasetyenziswa kwii-odolo ezinde nezimfutshane
Uninzi lwabathengi be-Intanethi banikezela umda
Unokufaka ii-odolo zokulahleka ukuze unciphise ilahleko yakho
Isicwangciso sokurhweba esichengeni kakhulu
Ungaphulukana nomda wakho wonke kurhwebo olunye
Ayilunganga kubathengisi abatsha
Ukuthengiswa kweMargin kusebenza njani?
Kuninzi ukufunda malunga nokuthengisa umda, ke siza kuyaphula iziseko zenyathelo ngenyathelo.
Okokuqala nokuphambili, kuhlala kukho umbono ongachananga wokuba amandla kunye nomda ubhekisa kwinto enye. Nangona zilungelelana enye nenye, kukho umahluko omncinci. Ngamafutshane, ngelixa amandla okubhekisa abhekisa kwi multiple oceba ukufaka isicelo kurhwebo lwakho, umda ubhekisa kwidiphozithi yangaphambili umrhwebi azakuyifuna kuwe.
Ke, uxinzelelo lubonakaliswa njenge 'ratio' okanye 'multiple'. Umzekelo, oku kunokuba ngu-5x no-5: 1, okanye u-10x no-10: 1. Ngenjongo yokulula, siza kuthetha ngokuxhamla njengamanzi amaninzi, kodwa yazi nje ukuba abanye abathengisi banokuyibonisa njengomlinganiso. Nangona kunjalo, isixa sombane othathe isigqibo sokusisebenzisa siya kuxela ukuba kufanelekile kangakanani kurhwebo lwakho.
Masithi ujonge ukuhamba ixesha elide kwizitokhwe zika-Apple
Une- $ 1,000 kwiakhawunti yakho, kodwa ufuna ukutyala imali ngakumbi
Kananjalo, usebenzisa uxhathiso lwe-5x
Oku kuthetha ukuba i-Apple yakho yokuthenga i-oda ngoku ixabisa i-5,000 yeedola
Ngokomzekelo ongentla, masithi kamva evekini i-Apple stocks inyuka nge-10%. Ngokuqhelekileyo, ubuya kwenza i- $ 100 yenzuzo, njengoko ibhalansi yakho iyi- $ 1,000. Nangona kunjalo, njengoko ufake isicelo somyinge we-5x, kufuneka siyiphindaphinde lento ngo-5. Kananjalo wenze inzuzo eyi- $ 500.
Ngale nto ithethwayo, kuya kufuneka sithathe ingqalelo kwinto eza kwenzeka ukuba ukuthengisa kwakho isitokhwe kweApple kuye kwelinye icala.
Ukuncamathela kumzekelo ofanayo njengasentla, une-odolo ye-1,000 5 yokuthenga kwi-Apple kwisisombululo se-XNUMXx
Emva kwexesha evekini, ii-Apple stocks ziyehla ngexabiso nge-5%
Ngokwesiqhelo, ubuya kuphulukana neepesenti ezintlanu zeedola ezili-5- eyi- $ 1,000.
Nangona kunjalo, usebenzise umyinge we-5x, ngenxa yoko ilahleko yakho ifikelela kwi- $ 250
Njengoko ubona, ukunyusa akusebenzi kuphela ekuphumeleleni ukuthengisa, kodwa ukulahlekelwa nabo.
Ke ngoku, ngoku uyazi ukuba uxinzelelo lusebenza njani, ngoku kufuneka sijonge imfuno yakho yomda. Kwindlela yayo esisiseko, umda kukukhuseleka kwangaphambi kokuba umrhwebi afune kuwe ukuze akwazi ukurhweba ngokunyusa. Ngokwemigaqo kaLayman, oku kumane kubungakanani borhwebo lwakho ngaphandle kwempembelelo.
Umzekelo, masithi uneedola ezingama-500 kwaye usebenzise amandla we-10x. Ngokuqinisekileyo, ubungakanani bezorhwebo lakho lilingana ne- $ 5,000- kodwa, umda wakho uyi- $ 500 kuphela. Kananjalo, eli lixabiso oya kuthi kufuneka ube nalo kwiakhawunti yakho ukuze ufumane urhwebo. Emva koko ibekwa 'kwiakhawunti yakho yomda' kude kube kuvaliwe urhwebo.
Ukuze usebenze ukuba ungakanani umgama oza kuwufuna ukubeka, kufuneka ujonge ezininzi.
Umzekelo, ukuba ufuna ukurhweba nge-10x, umda ofunekayo yi-10% (1/10)
Ukuba ufuna ukurhweba nge-30x, kuyakufuneka ubeke umda we-3.33% (1/30)
Oku kubaluleke kakhulu ukuyiqonda, njengoko umgama wakho wonke usemngciphekweni xa uthengisa ngogonyamelo.
Ukukhokela kwicandelo elingentla kwimida, ngoku kufuneka sixoxe ngentsingiselo 'yokuphelisa'. Njengoko kuphawuliwe ngaphambili, oku kuyakwenzeka ukuba urhwebo lwakho oluxhuzulisiweyo luchasene nawe ngaphezulu kunokuba unayo kwiakhawunti yakho yomda.
Masithi ufake isicelo kwi-oda yokuthenga kwi-GBP / USD
Ufake i-100 yeedola kwisilinganiselo se-20x
Oku kuthetha ukuba urhwebo lwakho luxabisa i-2,000 yeedola
Umda wakho weedola ezili-100 ukuya kwi-5% kubungakanani bezorhwebo
Ukuba urhwebo lwakho lwe-GBP / USD luchasene nawe nge-5%, umrhwebi uya kusiphelisa isikhundla
Oku kuthetha ukuba urhwebo luvaliwe ngokuzenzekelayo kwaye ulahlekelwe yimayile yakho eyi- $ 100
Njengoko ubona koku kungasentla, uya kupheliswa ukuba urhwebo luchasene nawe nge-5% - lelo lixa lomda owubekayo.
Komnye umzekelo, ukuba ubeke i-odolo ye-1,000 2 yeedola kwisisombululo se-50x, umda wakho ungafikelela kwi-500% - okanye kwi-50 yeedola. Kananjalo, uya kuba ne-buffer enkulu ye-20% ngaphambi kokuba urhwebo lwakho lucinywe, owona mngcipheko mkhulu kunokuba uthengise nge-XNUMXx.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba unokhetho lokuphepha ukupheliswa. Yaziwa njenge 'fowuni yomda', umrhwebi wakho omkhethileyo uya kukwazisa xa usondela kwixabiso lakho lokucinywa.
Umzekelo, masithi uthengisa i-FTSE 100 kwi-25x. Oku kuthetha ukuba umda wakho uyi-4%. Masicinge ukuba urhwebo lwakho luya ngokuchasene nawe nge-3.8% - ephantsi nje komyinge we-4%.
Nje ukuba ufumane umnxeba wakho we-margin ovela kumrhwebi, uya kuba nokukhetha kwezi zimbini:
Inketho yokuqala kukungenzi nto. Ukuba i-FTSE 100 iyaqhubeka nokuchasana nawe kwaye ibethe amanqaku e-4%, urhwebo lwakho luya kupheliswa kwaye umthengisi uya kugcina umda wakho.
Inketho yesibini kukongeza imali kwiakhawunti yakho yomda. Oku kuyakunika indawo yokuphefumla engaphezulu kwaye kuthintele urhwebo lwakho ekubeni lupheliswe-ubuncinci okwangoku.
Masicinge ukuba ekuqaleni ubeke umda weedola ezingama-500.
Uthengisa ngokunyusa ama-25x, oko kuthetha ukuba urhweba ngexabiso le- $ 12,500.
Usondela kumanqaku eepesenti ezi-4, oko kuthetha ukuba umngcipheko wokulahlekelwa ngumgama wakho ongange- $ 500
Kananjalo unquma ukongeza enye i-500 yeedola kwiakhawunti yakho yomda
Kwithiyori, oku kuthetha ukuba uzithengile ngokwakho i-4% eyongezelelweyo
Oko kukuthi, nokuba i-4% yokuyekiswa komhlaba ibangelwe, urhwebo lwakho luya kuhlala luvulekile njengoko ungeze i-4% kumda!
Ekugqibeleni, nangona ukongeza umda ongaphezulu kuya kukuthintela ukuba ungapheliswa kwithutyana elifutshane ukuba urhwebo luyaqhubeka ngokuchasene nawe kwaye urhwebo lwakho luvaliwe ngumrhwebi, imali oyakuphulukana nayo iya kuba nkulu ngakumbi.
Qaphela: Ngokuqinisekileyo ngekhe ufumane 'umnxeba' osemagqabini ngeyona ndlela inzima. Ngokuchasene noko, uya kwaziswa nge-imeyile okanye ngesaziso esiphathwayo.
Iintlawulo zoRhwebo lweMargin
Ngaphezulu kweefizi zakho eziqhelekileyo zokurhweba, urhwebo lomda luza neendleko ezongezelelweyo. Eyona nto iphambili koku kukuxhasa ngezimali ubusuku bonke.
Kungakhathaliseki ukuba ungakanani umrhumo ogqiba ukufaka isicelo kworhwebo lwakho, uya kuhlala uhlawula imali yokuhlawula imali ngobusuku. Le yintlawulo ehlawuliswa ngumrhwebi ngokukuboleka imali yokurhweba. Emva kwakho konke, uya kuthengisa ngemali engaphezu kweyakho kwi-akhawunti yakho-ngoko kuyavakala ukuba oku kufuneka kufike kwiindleko.
Ngokubalulekileyo, inkxaso-mali yobusuku isebenza njengenqanaba lenzala kwimali mboleko. Kwimeko yokuthengisa umda, kuya kufuneka uhlawule umrhumo wosuku ngalunye ogcina isikhundla sakho sivulekile. Kananjalo, ixesha elide ugcina urhwebo lwakho olufunyenweyo kwimarike, kokukhona kuya kufuneka uhlawule. Oku kunokuba nefuthe ngqo kubuchule bakho bokwenza inzuzo, ke kubaluleke kakhulu ukuba uvavanye ukuba uza kuhlawula malini.
Iindaba ezimnandi zezokuba uninzi lwabarhwebi esicebisa ukuba babonise imirhumo yakho yokufumana imali ubusuku bonke ngeedola neesenti. Oku kuthetha ukuba ufumana ikhefu elipheleleyo lokuba uza kuhlawula malini ngosuku. Ngamanye amaxesha, kuya kufuneka uhlawule ipremiyamu yokugcina isikhundla sivulekile kwimpelaveki. Oku kuya kuxhomekeka kwimpahla oyithengisayo, kunye nakumrhwebi othile owenza oku naye.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iindleko zakho zobusuku bobusuku ziya kuncitshiswa kwimali eseleyo. Ngale nto engqondweni, uya kuba ne-intshi kufutshane nexabiso lakho lokucoca usuku ngalunye ukuze ugcine indawo ivulekile.
Ezinye iindleko zokuthengisa
Ngaphezulu kwemali oyifumanayo yobusuku, kuya kufuneka uyithathe sasaza kunye nekhomishini yokurhweba kwiakhawunti.
Usasazeko: Lo ngumahluko phakathi kwexabiso lokuthenga kunye nokuthengisa kwempahla oyikhethileyo. Ukunyuka kokunwenwa, kokukhona kuya kufuneka uhlawule ngokungangqalanga kwimirhumo.
Ikhomishini: Ngelixa abanye abarhwebi behlawulisa iikhomishini zorhwebo, abanye abazenzi. Ukuba uhlawulisiwe, ke le yipesenti xa ithelekiswa nemali oyithengisayo. Umzekelo, ikhomishini ye-1% kurhwebo lwama- $ 200 iya kukuxabisa i $ 2.
Indlela yokunciphisa ubungozi boRhwebo lweMargin
Ke ngoku ukuba uyazi imingcipheko yokurhweba ngomda, ngoku kufuneka sijonge ezinye zeendlela onokuthi uzithathe ukunciphisa iilahleko zakho. Emva kwayo yonke loo nto, nabarhwebi abanamava badibana nelahleko rhoqo, kuba olu luhlobo nje lwendawo yotyalo-mali kwi-Intanethi. Ngale nto ithethwayo, abathengisi abanezakhono bayayazi indlela yokunciphisa ezi lahleko ngokufaka ii-odolo zokuyeka ilahleko.
Ukufaka i-stop-loss order iya kuba ngumahluko phakathi kokuphulukana ne- amancinane isixa semali kumashishini akho athengisiweyo okanye umgama wakho wonke. Kulabo abangaziyo, ii-odolo zokuyeka ilahleko zikuvumela ukuba uchaze elona xabiso ufuna urhwebo luvaliwe kulo.
Umzekelo, masithi usebenzisa umndilili we-10x kurhwebo lwe- $ 2,000. Oku kuthetha ukuba uya kuphulukana nomgama wakho xa urhwebo luchasene nawe nge-10%. Ngokuqinisekileyo awufuni kuphulukana ne-10%, ke ngokwendalo, ufaka i-odolo yokuyeka.
Ukuba ufuna ukunciphisa ilahleko yakho ibe yi-1%, kuya kufuneka ubonakalise oku kwixabiso lokuyeka ilahleko. Umzekelo, ukuba uthengisa i-Disney stocks kwi- $ 100 ngesabelo ngasinye, ixabiso lokulahleka kwe-stop-stop liya kufuna ukuba libekwe kwi-99 yeedola kwi-oda yokuthenga, kunye ne-101 kwi-oda yokuthengisa.
Ukuba kwaye nini xa ixabiso lokulahleka kwakho liyekile is ibangele, umrhwebi uza kuvala isikhundla ngokuzenzekelayo. Ekugqibeleni, oku kuya kukuthintela ekulahlekelweni yimali eninzi xa urhweba ngomda.
Zeziphi iiasethi endinokuzithengisa eMargin?
Ungazibandakanya norhwebo lomda malunga nazo naziphi na iiklasi zeeasethi ezinokubakho.
Oku kubandakanya yonke into ukusuka:
Ngale nto ithethwayo, kuyakufuneka uthengise ii-CFDs (izivumelwano zokungafani) ukuba unqwenela ukufaka isicelo kwiasethi oyikhethileyo. Ii-CFD zikuvumela ukuba uqikelele kwixabiso elizayo le-asethi ngaphandle kokuba uthathe ubunini.
Kananjalo, nangona iCFD yakho oyikhethileyo iza kulibonisa ixabiso lehlabathi eliyinyani, awuyi kuba nelungelo lokufumana izabelo okanye iintlawulo zekhuphoni, kwaye awuyi kuba namalungelo okuvota.
Iindaba ezimnandi zezokuba abathengisi beCFD basingatha amawaka ezixhobo zemali- zonke onokuzisebenzisa ukuze ufumane amandla kuzo.
Imida yokuThengisa iMargin
Xa kuziwa kwimida yokurhweba kwimida, oku kuya kuxhomekeka kwinani lezinto eziguqukayo- ezinje ngokuba ungumthengisi okanye umthengi oqeqeshiweyo, uhlobo lweasethi oyithengisayo, kunye nomrhwebi oyisebenzisayo.
Ukuba ungumrhwebi oqeqeshiweyo, kuya kufuneka ubenakho ukufaka isicelo esiphakamileyo njengoko umthengisi ekulungele ukukunika. Ngapha koko, oku kuhlala kuphakama njenge-200x kwabanye abathengisi. Oku kuthetha ukuba ngokufaka nje i $ 2,000, uya kukwazi ukurhweba nge $ 400,000!
Xa sele kuthethiwe oko, kuyakufuneka udlulise inkqubo yokuqinisekisa kwi-broker oyikhethileyo ukuze umisele umrhwebi oqeqeshiweyo. Umzekelo, kuyakufuneka uhlangane ubuncinci benetha, oya kuyidinga ukuqinisekisa ngohlobo loxwebhu.
Uya kudinga ukungqina ukuba unamava ezorhwebo. Kwakhona, oku kuyakufuneka kuqinisekiswe ngokunikezela ngoxwebhu olungqina oku.
Ukuba awukwazi ukungqina ukuba ungumrhwebi oqeqeshiweyo, uya kuthi uthathwe njengomthengi wentengiso. Ngelixa uza kuba nakho ukurhweba kumda, imida yakho iya kubanjwa. Oku kukhusela abarhwebi abangenamava ekulahlekelweni yimali eninzi.
Imida ethile inokuxhomekeka kwindawo okuyo. Umzekelo, bonke abarhwebi base-UK nabaseYurophu babanjwa yimida ebekiweyo yi-European Securities and Markets Authority (ESMA). Le mida isekwe kudidi oluthile lwearhente oyithengisayo, kwaye zezi zilandelayo:
I-30x: Izibini eziphambili ze-forex
I-20x: Iibini ze forex, igolide, kunye nezalathiso eziphambili
I-10x: Izinto zorhwebo ngaphandle kwegolide, ii-indices ezingabalulekanga
Nokuba awunguye ummi wase-UK / waseYurophu, uninzi lwabarhwebi abakwi-Intanethi balandela imida echazwe apha ngasentla.
Uluqala njani urhwebo lweMargin namhlanje
Njengesandi sentengiso yomda kwaye unqwenela ukuqala namhlanje? Ukuba kunjalo, ngoku siza kukunika isikhokelo ngenyathelo ngenyathelo malunga nento ekufuneka uyenzile.
Inyathelo 1: Khetha uMrhwebi oNikezela ngeNtengiso yeMargin
I-port yakho yokuqala yomnxeba iya kuba kukukhetha umrhwebi okwi-Intanethi onikezela urhwebo lomda. Ngokusisiseko, naliphi na iqonga eligcina ii-CFDs liya kukuvumela ukuba urhwebe ngokunyusa, ke kuya kufuneka uvavanye ezinye izinto eziguqukayo ngaphambi kokwenza isigqibo.
Oku kuya kubandakanya iintlobo zeempahla onokuzithengisa, iifizi zokuxhasa imali ngobusuku, iikhomishini, ukusasazeka, iindlela zokuhlawula, kunye nenkxaso yabathengi. Ngokubalulekileyo, kufuneka uqinisekise ukuba umthengisi wakho omkhethileyo unelayisensi yomzimba omnye onje FCA, ICSSEC, okanye ASIC.
Ukuba awunalo ixesha lokuphanda ngomrhwebi ngokwakho, uya kufumana amaqonga ethu aphezulu alinganisiweyo ukuya esiphelweni seli phepha. Bonke abathengi bethu abanconywayo balawulwa kakhulu, bayakuvumela ukuba urhwebe kumda ofikelela kwi-30: 1 (ngakumbi kubathengi abaqeqeshiweyo), kunye neenkxaso zeemfumba zeendlela zokuhlawula.
Nje ukuba ufumene umrhwebi ofanelekileyo wokurhweba, kuya kufuneka uvule iakhawunti. Inkqubo isebenza kakhulu ngokufanayo nokuba usebenzisa liphi iqonga, njengoko kuya kufuneka unikezele ngolwazi lomntu siqu.
Oku kuyakuquka eyakho:
Uya kudinga ukuphendula imibuzo malunga namava akho orhwebo. Kungenxa yokuba uya kuthengisa kunye nemveliso yokuphakamisa, ke umthengisi kufuneka azi ukuba unokuqonda okuqinisekileyo kwento oyenzayo.
Njengoko uza kusebenzisa i-broker elawulwayo, ngoku kuya kufuneka uqinisekise isazisi sakho. Uninzi lwamaqonga luya kukucela amaxwebhu amabini ngokukodwa-i-ID ekhutshwe ngurhulumente kunye nobungqina bokuhlala. Ngokumalunga neyokuqala, oku kunokuba yipasipoti, iphepha-mvume lokuqhuba, okanye ikhadi lesazisi lesizwe.
Kwaye eyokugqibela-kuyakufuneka ubonelele ngekopi yamva nje yesitetimenti sebhanki okanye ityala elisebenzisayo. Ixesha elithathwayo ukuze umrhwebi aqinisekise ukuba amaxwebhu akho ayahluka kakhulu. Ngale nto ithethwayo, uninzi lwamaqonga esiwacebisayo anokukwenza oko kwangoko.
Ngoku eyakho iakhawunti iqinisekisiwe, kuyakufuneka ubeke imali. Kwakhona, iinketho ezithile zokuhlawula ezikhoyo ziya kwahluka kwi-broker-to-broker, ke qiniseka ukuba uyakujonga oku ngaphambi kokuvula iakhawunti!
Kwiimeko ezininzi, uya kukhetha koku kulandelayo:
Ukutshintshwa kweBhanki yaseKhaya
Ucingo lweBhanki yaMazwe ngaMazwe
Kuya kufuneka uqinisekise ukuba ufuna isixa esincinci sedipozithi. Kwakhona, nikela ingqalelo ekhethekileyo kuyo nayiphi na imali enokubakho yentlawulo kwindlela oyikhethileyo yokuhlawula.
Inyathelo 5: Urhwebo kwiMargin
Ngoku ulungele ukubeka urhwebo lwakho lokuqala lomda. Qaphela, ukuba usebenzisa i-CFD broker emva koko awuzukufuna ukuvula iakhawunti eyahlukileyo ukuze usebenzise amandla. Oku kuyimeko kuphela ukuba usebenzisa inkampani yemveli yokuthengisa. Kananjalo, qala inkqubo ngokukhangela isixhobo semali onqwenela ukurhweba ngaso.
Nje ukuba uyazi ukuba yeyiphi iasethi ofuna ukuyithenga okanye ukuyithengisa, kuya kufuneka ungene:
Isiteki: Eli lixabiso onqwenela ukubeka umngcipheko kurhwebo. Masithi ubambe i $ 500
oluxhathisayo: Eli lixabiso lokuphakamisa ofuna ukulifaka. Masithi ukhetha i-3x
Njengoku kungasentla, uthabatha i-500 yeedola kwisisombululo se-3x- uthatha ubungakanani bakho beshishini buya kwi- $ 1,500. Ke ngoko, umda ofunekayo yi-33.3%. Ngamanye amagama, ukuba urhwebo lwakho luchasene nawe ngaphezulu kwe-33.3%, uya kuphulukana nomgama wakho wonke.
Okokugqibela, qinisekisa iodolo yakho yokwenza urhwebo.
Iindawo eziPhambili zokuThengisa iMargin kunye namaQonga ama-2021
Ngamakhulu ababoneleli bemarike ngoku abasebenza kwindawo yotyalo-mali, ukwazi ukuba leliphi iqonga lokungena kunye nabo kunokuba ngumceli mngeni. Kananjalo, ngoku siza kuxoxa ngeendawo zethu zokurhweba eziphezulu ezintlanu ze2021. Njengamaxesha onke, qiniseka ukuba uqhuba olwakho uphando ngaphambi kokuba ubhalise!
Isishwankathelo, ukurhweba kwimida sisicwangciso esiliqili sokutyalomali esikuvumela ukuba wandise inzuzo yakho. Ngethuba nje usebenzisa i-CFD broker ekhethekileyo, uya kuba nakho ukufaka isicelo kumawakawaka ezixhobo zemali. Oku kubandakanya isitokhwe, ii-indices, igesi, ioyile, igolide, ii-cryptocurrencies, kunye nexabiso lenzala. Kwiphepha le-flip, urhwebo lomda kunye nokuxhobisa nako kunokunyusa ilahleko yakho.
Kungenxa yoko le nto kufuneka ube nokuqonda okuqinisekileyo kwemingcipheko ngaphambi kokuba ungene. Nangona kunjalo, ukuba ucinga ukuba unesakhono eseta-useto kunye nolwazi ukuze ufumane eyakho ukuthengisa okuphakathi Umsebenzi oqale, singacebisa ukuba siphonononge elinye lamaqonga aphezulu aphezulu esixoxe ngawo kweli phepha.
Yintoni urhwebo lwemargin?
Ukurhweba ngomda kukuvumela ukuba usebenzise ubungakanani bemali ngaphezu kwe-akhawunti yakho. Kananjalo, nayiphi na inzuzo okanye ilahleko oyenzayo iya kwandiswa ngumyinge okhethiweyo wokuphakamisa.
Yimalini ekufuneka ndiyibekile xa ndirhweba nge-leverage?
Inani lemida oza kuyidinga ukuyibeka kwiidola kunye neesenti ziya kuxhomekeka kwinani lesisombululo onqwenela ukusisebenzisa. Eyona ndlela ilula kakhulu yokukubala kukwahlulahlula-hlula phakathi ku-1. Umzekelo, uxinzelelo lwe-5x luya kufuna umgama we-20% (1/5), kunye no-2x ku-50% (1/2).
Leliphi elona xabiso liphezulu lomda endinokurhweba nawo
Oku kuxhomekeke ekubeni nokuba ungumthengisi weentengiso okanye hayi. Ukuba kunjalo, uninzi lwabarhwebi luya kukufaka kwi-30: 1. Ukuba ungumrhwebi oqeqeshiweyo, oku kunokuya phezulu njenge-500: 1.
Ndingasisebenzisa isibonelelo kunye nokuthengisa okufutshane ngaxeshanye
Ngokuqinisekileyo unako. Ngapha koko, nokuba uthatha isigqibo sokufaka isibonelelo sokuthenga okanye ukuthengisa iodolo ixhomekeke kuwe.
Kuthetha ntoni ukupheliswa?
Ukuba urhwebo lwakho oluhlawulisiweyo luchasene nawe ngaphezulu kunokuba unayo kwiakhawunti yakho yomda, urhwebo lwakho luya kupheliswa. Oku kuthetha ukuba umthengisi uya kuvala urhwebo egameni lakho, kwaye emva koko ugcine umda wakho.
Iyiphi umnxeba wegama?
Ifowuni yomda yenzeka xa usondela kwixabiso lakho lokucinywa. Umrhwebi uhlala eshiyekile ngaphandle kokuba ukongeza imali engaphezulu kumda wakho, urhwebo lwakho lunokupheliswa.
Ngaba urhwebo lomda lusemthethweni?
Ewe, urhwebo lomda lusemthethweni kumazwe amaninzi. Ngale nto ithethwayo, kukho imigaqo engqongqo ekhoyo yokuqinisekisa ukuba abathengisi abangenamava abalahlekelwa yimali engaphezulu kunokuba bekwazi ukuyilahla.